Graphite Mould yeiyo Inokosha Simbi Vagadziri & Vatengesi | China Graphite Mould yeakakosha Simbi Fekitori
Vacuum aluminized graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist
Ichi chigadzirwa igirafu ye graphite inoshandiswa muvhoriyamu aluminizing michina. Iyo yevharo aluminized graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist inogadzirwa neakasarudzika kurapwa, ine yekupedzisira-yakareba sevhisi hupenyu, kazhinji anopfuura maawa makumi mashanu.
Simbi yekunyungudutsa indasitiri
Simbi yekunyungudika inzira yekushandura simbi kubva kune yakasanganiswa nyika kuenda kusununguka nyika. Iyo yekuderedza maitiro e kabhoni, kabhoni monoxide, hydrogen uye mamwe ekudzora mamirioni ane simbi oxides pakakwirira tembiricha inogona kuwana simbi zvinhu.
Imwe-mhete yakachena kuchena graphite crucible yekunyungudutsa simbi dzakakosha
Iyo yakakosha simbi yekunyungudika yakakamurwa kuita roughing nekunatsa. Yakachena kuchena simbi dzakakosha dzinowanikwa nekunyungudutsa yakachena kuchena yakakosha simbi. Iyo graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist inoshandiswa mukuchenesa inoda yakakwira chinodiwa kune iyo kuchena, huwandu hwakawanda, porosity, simba uye zvimwe zviratidzo. Iyo ficha isostatic kumanikidza kana kuumbwa graphite ine matatu yekunyika uye ina kubheka. Izvo zvinogadziriswa zvinodiwa zvakanyanya kuomarara, kwete chete saizi yezvakanaka, asi zvakare kupora kwepamusoro. Yedu graphite zvinhu zvakanyatsoedzwa uye zvakanyatso sarudzwa kuona kuti inogona kuenzaniswa pamwe nesimba, iyo yekudziya mhedzisiro ndiyo yakanyanya kunaka, uye iyo yekugadzirisa tekinoroji inofanira kusangana neyakagadzirwa zvinodiwa.
Mhete-mbiri yakachena kuchena graphite Kukuru Mukutika Zvinhu Zvinokosha-Mhete-mbiri yakachena kuchena graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist